वीरगञ्जमा ८ चिकित्सकसहित २८ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, १६ साउन-वीरगञ्जमा २८ जना स्वास्थ्यकर्मी कोरोना भाइरस संक्रमित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मापदण्डको पालना नगरेकाले स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिएको बताए ।
उनका अनुसार ८ चिकित्सक, ६ नर्सिङ स्टाफ र ४ पारामेडिससहित २८ जना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । ‘यसमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो नगरेको भन्ने रिपोर्ट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ । सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई मास्क,पञ्जा र एप्रोन लगाउन हामी अनुरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।
उनले छिमेकी भारतका नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यमा कोरोना संक्रमण बढेकाले त्यसले नेपाललाई पनि जोखिम रहेको मन्त्रालयले औँल्याएको छ । प्रवक्ता प्रा.डा. गौतमले नेपालसँग जोडिएका ४ वटा राज्य उत्तारञ्चल, उत्तर प्रदेश, बिहार र वेस्ट बंगालमा निकै कोरोना संक्रमित बढेको भन्दै उनले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।
त्यस्तै, मास्कको प्रयोग नगर्ने २ लाख जनालाई कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । १६ हजार जनालाई मन्त्रालयले मास्क वितरण गरेको छ । साथै मास्क सबैलाई लगाउनका लागि मन्त्रालयले अनुरोधसमेत गरेको छ ।
आज काठमाडौंका ३२, ललितपुरका ५ र भक्तपुरका १ जनामा कोरोना पुष्टि
हाम्रो कार्यसम्पादन शैली ‘लकिरका फकिर’ जस्तो भयो : रक्षामन्त्री पोखरेल